Izindawo ze-Casino eziku-inthanethi zaseVietnam | Amakhodi E-inthanethi e-Casino
(588 amavoti, isilinganiso: 5.00 out of 5)
Iyalayisha ... Amasayithi e-casino e-inthanethi avuma abadlali baseVietnam
Bona uhlu lwamasayithi ekhasino aku-inthanethi amukela abadlali abavela eVietnam, futhi anikele ngemidlalo esezingeni eliphakeme nephephile. Lapha uzothola izinhlobo ezahlukahlukene zokuzijabulisa kusuka kumishini yama-slot kuya kumageyimu wekhasino bukhoma kusuka kubathengisi besoftware abadumile njengeNetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, nabanye abaningi. Ungafunda futhi nokubuyekezwa kwethu kwamasayithi ekhasino aku-inthanethi, ukuze wazi ukukhushulwa okungcono kakhulu okuku-inthanethi, amabhonasi nezinketho zokukhokha ezitholakala kubadlali abavela eVietnam.
Uhlu lwezindawo ze-Casino eziphezulu ze-10 zase-Vietnamese ku-Casino
Muva nje, iVietnam ayikho phakathi kwamazwe ajabulela ukunakekelwa kwabavakashi, futhi nokutshalwa kwemali lapha akekho noyedwa owenzile. Kepha namhlanje isimo sishintshe kakhulu, kanti iVietnam yamanje, nomnotho wayo okhula ngokushesha, okhombisa ukukhula okuqinile, sekuhehe kubo bonke.
Ukugeleza kwalabo abafisa ukujwayela izwe nobuhle balo kukhule kakhulu, phakathi kwezihambeli, kunabalandeli abaningi bezokungcebeleka kwezokugembula. Ngakho-ke, ukwakhiwa nokuthuthukiswa kwekhasino kuzoba wusizo olukhulu ekugcwaliseni isabelomali, nasekutheleleni okwengeziwe kwabavakashi.
Manje iziphathimandla zaseVietnam zenza imizamo emikhulu kulokhu. Kulindeleke ukuthi ukuthuthukiswa komkhakha wezokuvakasha kuzothola umfutho owengeziwe ngokwakhiwa kwamakhasino nemidlalo yesiko le-poker. Lokhu kuzovumela izivakashi zezwe ukuthi zingagcini nje ngokujwayelana namasiko nokubuka kwaleli zwe lase-Asia, kepha futhi zibe nesikhathi esihle samahhala sokuzijabulisa ngokugembula. Kepha kubantu bendawo le ndlela yokuphumula izohlala ingatholakali.
Nokho, asikwazi ukukhuluma ngokuhlukaniswa okuphelele embonini yezokugembula yaseVietnam . Kancane kancane, uhulumeni unciphisa umphumela wokuvinjelwa kanye nezakhamizi ezisanda kuvunyelwa ukudlala ekhasino eliku-inthanethi. Okwamanje, lokhu kuseseyisixazululo sokuhlola, kepha abadlali abaningi bakholelwa ukuthi manje bazokwazi ukufinyelela ngokushesha. Njengamanje eVietnam banikeze amalayisense opharetha abanolayini abayisikhombisa.
Ukuqhubeka nendikimba, siyabona ukuthi maduze nje kuzovulwa amakhasino amakhulu azosebenza ezweni, azoba ngumnikazi wenkampani iMGM Resorts International. Futhi umdali walokhu kudalwa wenza inkampani yaseCanada i-Asian Coast Development. Vakashela ikhasino kuzovunyelwa izivakashi zakwamanye amazwe kuphela, kuyilapho ukungena kweVietnam lapho kuzokwenqatshwa.
Ukuvakasha ukugembula eVietnam kuzokuthuthukisa
Iphishekela ukuthuthuka okusebenzayo kwezwe, inaka ngokukhethekile amandla ezindawo eziseningizimu, lapho izindawo ezinkulu zokungcebeleka zaseVietnam. Kukhona ukufunwa okungapheli kwezixazululo ezintsha zokwenza le ndawo ihehe kakhulu izivakashi. Futhi ikhasino ingenye yazo. Akuyona imfihlo ukuthi izindawo zokugembula ziyakwazi ukunikeza ukwanda kwesibalo sezivakashi, phakathi kwazo abalandeli abaningi bezokuzijabulisa kwezokugembula.
Empeleni, ukubonakala kwamakhasino okuqala eVietnam kwaba umcimbi ophawulekayo , omunye angaze athi, uhlobo oluthile lwenkohliso. Ngemuva kwalokho, isikhathi eside ezweni bekuvinjelwe kukho konke ukugembula, ingasaphathwa eyokugembula okuku-inthanethi. Ngesikhathi sokusebenza kokugembula kwekhasino kufakazele ukusebenza kwaso nokunemba kwalesi sinqumo. Izibalo zokuhamba kwedatha yezivakashi ezivela emazweni ahlukene zikhule kakhulu. Futhi lokhu kuxhumene hhayi kuphela nokungenisa izihambi, insizakalo enhle kakhulu namabhishi amakhulu, kepha futhi nomsebenzi wekhasino.
Iziphathimandla zaseVietnam akudingeki ziphinde zilivuselele leli sondo, kepha zihambe ngendlela enyathelwe kahle eseyinqobile iChina. izivumelwano zaphothulwa nezinkampani ezinkulu kanye nezinkampani ezinkulu, ezingakhiwanga ikhasino kuphela, kodwa nengqalasizinda yonke (amahhotela, izindawo zokuthenga, izindawo zokudlela, nokunye okuningi). Ngokushintshana, bathola ilungelo lokuqhuba ibhizinisi lokugembula eVietnam.
Isixazululo, ngokuvamile, asilungisi nje kuphela, kepha futhi sihlakaniphile. Kungani? Ukuze usebenzise i-turnkey eyodwa yekhasino kudinga utshalomali olukhulu. Futhi ukubathola ekhaya akunangqondo. Akukabikho nje inhlokodolobha enjalo. Futhi nezinga elifanele lochwepheshe, futhi. Vele, ngokuhamba kwesikhathi isimo singashintsha, futhi sizobona ukuthi sekuvele kube yikhasino elivulwe izinkampani zendawo, kepha okwamanje izinto zinjengoba kushiwo ngenhla.
Namuhla abagembuli baseVietnam bazimisele ukuthatha izindawo eziyisithupha zabavakashi. Yile nombolo esebenza namuhla. Hhayi ukuphumula kuphela kepha nokudlala ekhasino kuza izakhamizi zamazwe amaningi omhlaba. Izikhungo ezimbalwa ezinkulu zokudlala ezitholakala eduze komngcele waseChina, ngenxa yokugeleza okukhulu kwamakhasimende ngakolunye uhlangothi.
Vimbela ukuvakashela i-casino ye-Vietnamese eholele ekutheni leli zwe liqale ukuvela kwikasino eminingi engekho emthethweni.
Ukusho ukuthi ukugembula ngomshoshaphansi kulimaza kakhulu umnotho wezwe akulungile. Kepha lapha bahlinzeka ngokwanda kobugebengu ngqo. Yize kunjalo, ipeni elengeziwe kumgcinimafa wombuso kusuka kuzintela ngeke libe ngaphezulu. Njengamanje, kuwo wonke amazwe ase-Asia eVietnam - aphephe kakhulu kubavakashi. Ngakho-ke, impi yokulwa namahholo okudlala ngokungemthetho ezweni iyaqhubeka.
Ukulungisa lesi simo, njengoba kuphawuliwe ekuqaleni, iziphathimandla zavumela izakhamuzi zayo ukuthi zidlale amakhasino aku-inthanethi. Kungenzeka ukuthi kungekudala bavunyelwe ukuvakashela umhlaba kanye nokugembula. Le nkinga ixoxwa ngenkuthalo emibuthanweni kahulumeni, futhi ilawulwa nguNdunankulu waseVietnam. Kepha kwabezizwe iVietnam - indawo enhle lapho ungaphumuli khona kuphela, kepha futhi nokudlala ekhasino ngemali.
Umthetho wezomthetho webhizinisi lokugembula eVietnam
Ngaphandle kokwakhiwa kwezimo ezifanele zabatshalizimali besikhathi esizayo kanye nabaqhubi nganoma yikuphi ukuthuthukiswa okuphumelelayo kokugembula abakwazi ukuhamba nokukhuluma. Iwazi kahle amandla ezwe, ngakho-ke zama ukwenza indawo yokutshala imali eVietnam ibe ntofontofo ngangokunokwenzeka, ungakhohlwa izintshisekelo zombuso.
Ukuheha izinkampani ezintsha, ezingeni lomthetho, kwenziwa izinguquko maqondana nokuqoqwa kwentela emisebenzini yokugembula. Ngakho-ke kunciphise kakhulu inani eliphansi lokutshalwa kwemali elidingekayo ukuze kuvunyelwe ukuvulwa kwekhasino (kuze kufike ku- $ 3 billion), kwehlise inani lenzalo yentela yokugembula laya ku-35% wemali engenayo.
Lezi zinyathelo iziphathimandla zinethemba lokudala ukuncintisana phakathi kwabaqhubi bekhasino. Ngemuva kwakho konke, kokubili intela kanye nokutshalwa kwemali okuncane kuncishisiwe emthethweni onjalo kucishe kwaphindwa kabili. Vele manje singalindela ukuvulwa kwamakhasino amasha futhi, ngokufanele, ukukhulisa imali eyengeziwe ezweni. Izakhamizi zasendaweni nazo emthethweni zinikeze imvume yokugembula, kepha ngemikhawulo ethile kubudala nasezingeni lemali engenayo yenyanga.
Kungabonakala, hhayi kudala lapho igama elithi Vietnam, bonke bekhumbula impi neMelika. Kepha, yize kungabonakali ukuthi isikhathi sasindiza kanjani, iminyaka yadlula futhi izwe lase-Asia selingasafani nakuqala. Kusukela esimweni sokubuyela emuva kwezolimo, iVietnam iphenduka izwe elithuthukile, umnotho walo okhula ngokuxhuma nemingcele. Futhi ngoba akumangazi ukuthi abatshalizimali abaningi ngokwengeziwe baphendukela kuyo izintshisekelo zabo zebhizinisi.
IVietnam isiphenduke isisulu esikhangayo sabavakashi futhi bazimisele ngokwengeziwe ukujwayelana nalesi sifunda esingajwayelekile, abafuna ukuvakashela izwe. Vele, kungokwemvelo ukuthi ukwandisa ukugeleza kwezivakashi, iziphathimandla zizama ukwenza okuningi, kuze kube seqophelweni lokuheha abatshalizimali ekuthuthukiseni ukugembula. Ngempela, phakathi kwezivakashi nakanjani ukuhlangana nabadlali bezokugembula abazohlanganisa ngenjabulo "ibhizinisi nenjabulo", okungukuthi, futhi bajabulele ukuvakasha okuqondiswayo ezindaweni ezinhle nezomlando, bese bechitha ubusuku ngomdlalo oyintandokazi. Ukugembula kwezokuvakasha eVietnam kuyathuthuka.
IVietnam ihola ekugembula
Imboni yokugembula iletha njalo imali enhle. Uma iziphathimandla zithatha isinqumo sokuvumela ukugembula okuku-inthanethi ezweni, ngaleyo ndlela zizitholela enye imali enenzuzo enkulu kwisabelomali sendawo. Azihlukile kweVietnam yonke kanye nababusi, abakholelwa ukuthi ukwakhiwa kwekhasino kuzosiza ukukhuphula ukuhamba kwemali. Njengoba sazi ngokuhlangenwe nakho kwamanye amazwe, ukuba khona kwekhasino kunoma yiliphi izwe lase-Asia eliyingqayizivele kuhlala kudonsela izivakashi eziningi ngokwengeziwe. Ngakho-ke, ukuvulwa kwenani elikhulu kunawo wonke lamahhotela nezokuzijabulisa nokwandiswa kwemidlalo ye-poker kuzovumela izivakashi ukuthi zikuthokozele ngokugcwele ukuvakashela iVietnam neziphathimandla - ikhono lokuheha abatshalizimali futhi likhiqize imali eyengeziwe kumgcinimafa. Yilokho nje abantu bendawo abangadlali noma iyiphi i-poker noma i-casino play.
Uma sikhuluma ngokuvinjelwa kwamaVietnam ukuthi kudlalwe ekhasino, sithande kakhulu. Sikhuluma ngokuvakashela ikhasino langempela, kepha hhayi elibonakalayo. Esikhathini esingengakanani esidlule, iziphathimandla zaseVietnam sezinqume ukwenza ucwaningo futhi zanikeza izakhamizi imvume yokudlala amakhasino aku-inthanethi. Abadlali banethemba lokuthi ukuhlolwa kuyaphumelela, futhi ukuvinjelwa kuzosuswa ngokuphelele, bese ubheka, nasehholo lokugembula kuzotholakala. Kuze kube manje, okufanayo kufanele kwaneliswe ngezinsizakalo zabasebenza abayisikhombisa abagembula online.
Izivakashi zakwamanye amazwe kungekudala zihlela ukuvula ikhasino enkulu, ezoba ngumnikazi wenkampani yaseMelika iResorts International, iMGM. Izinsizakalo zayo zokwenza iphrojekthi nokwakhiwa kwalesi sakhiwo zizohlinzeka inkampani yaseCanada i-Asian Coast Development. Njengoba sesivele sabhala, kepha ukufinyelela kuyo kuyisimangaliso sobuchwepheshe besimanje futhi umhlaba wokudlala uzovulelwa kuphela abantu bakwamanye amazwe, iVietnam ayivunyelwe ukufinyelela.
Iziphathimandla zaseVietnam zihlelwe ekuthuthukisweni okusebenzayo kokugembula
IVietnam inokuthile engakukhombisa izivakashi, ngaphandle kwezikhumbuzo zomlando kanye namamaki engxabano yase-US-Vietnam. Ezindaweni eziseningizimu yalesi sifundazwe esincane kunezindawo zokungcebeleka ezinhle kakhulu ezilinde abatshalizimali, bese kuba izivakashi. Ngakho-ke, iziphathimandla zizimisele ukuthatha iziphakamiso ezahlukahlukene zokuthuthukisa ezokuvakasha ezweni lazo lilonke, kanye nokugembula. Ngakho-ke, akugcini lapho ekwakhiweni kwamahhotela kanokusho nengqalasizinda yonke ehambisana nakho, kepha futhi banaka kakhulu ukwakhiwa kwekhasino. Ngemuva kokuphumula, abantu bafuna ukuzama imisebenzi enhlobonhlobo yokuzilibazisa futhi nalabo abangakaze baye ehholo lokugembula akunakwenzeka ukuthi bagweme isilingo sokuvakashela ikhasino okungenani kanye. Akunalutho ngempela lokukhuluma ngabadlali bokugembula abalungele ukudlala noma kunini, noma kuphi.
Lapho bethatha isinqumo ngokuvulwa kwamakhasino ezweni, iziphathimandla zaseVietnam zithathe isinyathelo esifanelekile futhi esicabangayo. Impela kwakumangaza kakhulu futhi kuyamangaza ezweni “lendabuko”, ngoba ukugembula kwakwenqatshelwe isikhathi eside impela. Kepha lesi sinqumo silethe umphumela omuhle, ngoba ukungena kwezivakashi ezivela emhlabeni wonke kukhuphuke kakhulu, ngokusho kwezibalo. Vele, kubantu bakwamanye amazwe kulo lonke ihhotela banikezela ngezinsizakalo ezinhle kakhulu, insizakalo ehlakaniphile eheha izivakashi njengobuhle obumangalisayo bamabhishi nemvelo engajwayelekile. Kepha ukuvela kwamakhasino eVietnam kudlale indima enkulu.
Yamukela okuhlangenwe nakho kwamanye amazwe ase-Asia, okufanayo eChina ngokwesibonelo, iziphathimandla zaseVietnam zenze kahle kakhulu. Kungani usungula okusha nokungajwayelekile, uma sekuvele kunesibonelo esihle sendlela yokuheha izivakashi eziningi ngokwengeziwe ezweni, ngaleyo ndlela kwandise ukungena kwemali kwisabelomali? Vele, bona ngokwabo iVietnam cishe abanalo ulwazi lokwakha nezinsizakalo zamakhasino, kepha emhlabeni wezinkampani eziningi ezinkulu nezinokwethenjelwa ezingasiza hhayi kuphela ngokwakhiwa kwekhasino uqobo, kodwa futhi nazo zonke ezakhelene nayo, ngakho-ke kuyadingeka yengqalasizinda yabavakashi, okungukuthi, amahhotela, izikhungo zokuthenga, ama-boutique, izindawo zokudlela, imigoqo njalonjalo. Kule nkampani osonkontileka ngokuzayo bazoba nelungelo lesabelo salo sebhizinisi lokugembula eVietnam.
Njengoba sesivele sabhala, ongoti ekusungulweni kwezikhungo ezinjalo, ezizokwazi ukuncintisana namakhasino adume kakhulu emhlabeni, akuyona iVietnam. Futhi imali, kunjalo, nayo. Ngakho-ke thatha ababusi ababona kude kanye nesinqumo esifanele sokuheha ongoti nabatshalizimali bakwamanye amazwe. Kunzima ngisho nokucabanga ukuthi ingakanani imali edingekayo nezindleko zabasebenzi nokuvula okungenani isikhungo esisodwa sokuzijabulisa, ngawo wonke amahhotela, amakhasino, amadamu okubhukuda, ama-spa, izindawo zokudlela nezinye izinto. Kepha lokhu akusho ukuthi yizinkampani zangaphandle kuphela eziyohlala zisebenza ekwakheni izakhiwo ezinjalo ezweni. Kungenzeka, iziphathimandla zizoya ekuthathweni kwesinqumo esifanele nangaphezulu futhi zizoqeqesha abahlali bendawo ngakho konke okudingayo "ubuqili" ukuze uqhubeke nezindleko zabo. Mhlawumbe ngeke kwenzeke maduzane,
Kakade namuhla kulindelwe izivakashi, zikulungele ngokuphelele ukwamukela izivakashi, futhi ezisebenzayo, abafazi abayisithupha babavakashi. Banikeza izivakashi hhayi ukuphumula kuphela, kukho konke ukunambitheka nezifiso, kepha futhi nethuba lokuvakashela ikhasino futhi ujabulele imidlalo oyithandayo. Futhi abadlali, futhi nje bafuna okungabizi kakhulu ukuphumula emhlabeni wonke sebevele sebezimisele ngokuvakashela iVietnam. Ngaphezu kwalokho, amanye amakhasino amakhulu futhi athuthukisiwe atholakala eduze komngcele neChina. Abadlali abavela kuleli zwe elingumakhelwane nabacebile bahlala njalo futhi izivakashi eziningi zalezi zikhungo eVietnam.
Njengoba kade kwaziwa, isithelo esenqatshelwe sinoshukela. Lokho ibhizinisi lokugembula eVietnam lithandwa kakhulu, futhi naphezu kwakho konke ukwenqatshelwa nezinhlawulo, inani lamakhasino angekho emthethweni liyabonakala.
Yize izikhungo ezingekho emthethweni ezweni zanele, azinabungozi kangako esabelweni sezwe, kungakanani ukulinyazwa kwezivakashi, ngoba lezi zikhungo yizindawo zokuzalela izigebengu namasela. Amaphoyisa aseVietnam athatha izinyathelo zokulwa nokugembula okungekho emthethweni, futhi ngempumelelo enkulu. Lokhu kungahlulelwa ngokuthi okwamanje, iVietnam ibhekwa njengendawo evikelekile kakhulu yezivakashi. Kepha imali engenayo ngokugembula okungekho emthethweni ngeke ibe nomthelela omncane ekugcwalisweni kwesabelomali sendawo, futhi isize ukuxazulula izinkinga ezifanayo zenhlalo, ngokwesibonelo.
Mhlawumbe kumakhasino angaphansi komhlaba angavakashelwa eVietnam, iziphathimandla futhi anquma ukuvumela ikhasino eliku-inthanethi laleli lizwe. Mhlawumbe ngoba lolu daba kungekudala luzofinyelela ekuqedeni ngokuphelele ukuvinjelwa kokugembula kwabantu bendawo futhi bazokwazi ukugcina "igazi" labo ekhasino elijwayelekile, bachithe ubusuku etafuleni lokudlala bezungezwe abangane. Iziphathimandla zibucayi kakhulu ngalolu daba, kanti uNdunankulu waseVietnam waze wamthatha wamlawula ngendlela ekhethekile. Kuze kube manje, izivakashi zakwamanye amazwe kuphela ezinenhlanhla yokuvakashela lezi zindawo ezinhle kakhulu, zihlala emahhotela amahle futhi zivakashela izindawo ezahlukahlukene ezithakazelisayo, phakathi kwemidlalo esekhasino, kunjalo.
Ibhizinisi lokugembula eVietnam ngokwemithetho
Wonke umuntu uyazi ukuthi ukuze uphumelele ekuthuthukisweni kwebhizinisi lokugembula ezweni labo, akwenele ukumema nje umbhangqwana ukuthi uqale uthole abatshalizimali nosonkontileka bezokwakha bese ulinda kuze kube konke kuzokwakhiwa bese kuqala ukwenza imali. Iziphathimandla zaseVietnam ziyiqonda kangcono kunezinye, ngakho-ke ukuqala ukwakha uhlaka lomthetho oluzobheka zombili izintshisekelo zabatshali bezimali abangahle babe khona, futhi bakhohlwe ngomnotho.
Amanye amaphuzu abalulekile alesi sisekelo yizinguquko enteleni yokugembula. Ukuze uhehe inani elikhulayo labatshalizimali, inani eliphansi lokutshalwa kwemali kwelungelo lokuvula indawo yokugembula, lehliswe laba ngamadola ayizigidi eziyizinkulungwane ezintathu, kanti nezinga lenzalo lentela “lisike” laze lafika kumaphesenti angamashumi amathathu nanhlanu emali ukugembula.
Zonke lezi zinyathelo zenzelwe ukuqinisekisa ukuthi ukuncintisana phakathi kwabaqhubi bezikhungo zokugembula kuyanda kuphela. Uma kubhekwa izinombolo ezibanjiwe, intela kanye nokutshalwa kwezimali okuncane kucishe kwaba uhhafu. Lezi zinto ezintsha zithandeka kakhulu kubatshalizimali abavela kwamanye amazwe futhi iziphathimandla zaseVietnam zilindele ukwanda okusheshayo kwenani lamakhasino enkanjini yawo ezoletha imali eningi kumgcinimafa kahulumeni. Izishayamthetho zaya ngisho nasendleleni yokuthuthuka kwebhizinisi lokugembula kanti ezinye izakhamizi sezivele zilitholile ilungelo lokuvakashela amahholo okugembula. Kodwa-ke, kunemikhawulo ethile "kusayizi wesikhwama semali", nangobudala babadlali.
Njengoba singabona kusukela ngenhla, iziphathimandla zaseVietnam zikhathazeke kakhulu ngokukhula kwezomnotho kuleli zwe futhi zenze konke okusemandleni ezweni lakubo ziye zafika ezingeni eliphakeme lokuthuthukiswa futhi liye lalingummeleli omele ukugembula kwe-Asia.
0.1 Uhlu lwezindawo ze-Casino eziphezulu ze-10 zase-Vietnamese ku-Casino
3 I-casino yaseVietnam
3.0.1 Ukuvakasha ukugembula eVietnam kuzokuthuthukisa
3.0.2 Umthetho wezomthetho webhizinisi lokugembula eVietnam
awekho amakhodi webhonasi yediphozithi yekhasino lekati elipholile